Ideas de paleta de colores Ny fampidirana ny Palette loko
Ny fampidirana ny Palette loko
Paikady miloko marefo tsy misy dikany
Amin’ny ankapobeny, ny volomparasy dia mifandray amin’ny fahendrena, famoronana, fahaleovan-tena, majika ary mistery. Ny fananana volomparasy eo ambany fifehezantsika (artistic) dia toa sarotra. Ny torohevitra maintso momba ny fahasalamana sy ny vola, ary ny volomparasy dia manome fahendrena, fahamboniana ary fanajana. Ny voloko tsy volomparasy. Satria ny volomparasy dia noforonina amin’ny fampifangaroana loko mafana sy mangatsiaka mafy, mitazona ny toetra roa izy. Ny loko volomparasy dia mahalana mitranga amin’ny natiora ary, vokatr’izany dia matetika noheverina ho masina. Ny loko volomparasy faharoa (hita eo anelanelan’ny mena sy ny manga eo amin’ny kodiarana miloko) ary ny alokaloka dia ny volo manga sy ny mena mafana miaraka amin’ny hatsiaka mena.
Safidy Palette loko ambony indrindra
Vantany vao mametraka ny loko ianao, ary fantatry ny olona momba ny marika anao, dia tsy mitadidy ianao fa mahatsiaro izany amin’ny loko. Ny ankamaroan’ny olona dia hilaza fa ny manga no lokon’ny tiany. Koa satria ny loko tiany indrindra amin’ny ankamaroan’ny olona, ​​dia afaka mitaky haingana amin’ny mpihaino bebe kokoa ianao. Ny loko maivana dia tsara indrindra ho an’ny faritra miaraka amin’ny loko maizina indrindra ho an’ny lahatsoratra. Izy io dia mety amin’ny loko accent, miantso hetsika, na amin’ny toerana tiany halehan’ny olona. Amin’ny farany, manondro loko accent izy ireo dia toa tsy dia mahaliana ny ankamaroan’ny.
Paleta miloko – ny tantara
Ahoana ny fisafidianana ny loko mety amin’ny fampiharanao Ahoana ny fisafidianana ny loko mety amin’ny fangatahanao Fantaro ny fomba fijerin’ny mpihaino Na dia misy dikany iraisan’ny rehetra aza ny loko sasany, maro ny loko manana fomba fijery samihafa eo an-toerana. Ny loko loko fampiharana dia tsy maintsy miaraka amin’ny votoatin’ny fampiharana ary ny tanjony. Ny loko tsy mety amin’ny dikany dia mety hiteraka valiny mampidi-doza.
Ahoana no hanombohana amin’ny Palette Loko?
Ny olona dia mahita loko amin’ny toerana voalohany, ka faharoa ny zava-drehetra. Mazava ho azy, te hisafidy ny loko tianao indrindra ianao. Ny loko dia manana endrika kanto tsy mendrika. Ny loko sasany dia mety hanova ny fihetsitsika, na misy fiantraikany amin’ny toe-batana aza. Ny loko sy filozofia tonga lafatra dia ho lasa fitaovana fivarotana tena ho an’ny fangatahana.
Ny tantaran’ny Palette loko refy
Rehefa tonga ao amin’ny bilaoginao ny mpitsidika vaovao, ny loko voalohany dia ny loko. Ny fampiasana loko hananganana efitrano, trano na birao dia fomba mora hanatsarana ny angovo ao amin’ny tontolo iainananao ary indrindra eo aminao. Ampiasaina am-pahatsiarovan-tena ny fantsona efa niniana natao manerantany. Ny loko kisary fampiharana dia tokony haneho amin’ny feo mahery sy mazava ny fampiasa.
Ahoana ny fisafidianana ny lokon’ny palety
Ny fanavaozana ny paleta loko an-dakozia dia tsy voatery ho lafo vidy. Paleta loko iray dia amboarin’ny loko 2 na 3 azo ampiasaina na aiza na aiza ho an’ny marika. Ny paletinay loko dia manolotra lohalaharana iraisana amin’ny haino aman-jery rehetra, ao anatin’izany ny fitaovana vita pirinty, ny fampiroboroboana sy ny habaka amin’ny Internet. Tsy maintsy mamaritra ny paletinao ianao ary apetraho amin’ny telo ny loko. Palette loko loko FAHORONANA dia mahazo alalana amin’ny fampiasana voafetra ny fanohanan’ny loko PALETTESA.
Manaraka izany, hanazava ny fomba tokony hampiasanao hampiasa ireo mpaka sary loko toy izao manaraka izao aho:
1. Tsindrio Select “Safidio ny sarinao”, avy eo fidio ny sary tianao ho fantatra ny loko loko sy ny vesatra.
2. Soraty ao anaty tsipika banga ny anaran’ilay sary, aorian’ny “Ampidiro anarana anarana”
3. avy eo tsindrio ny “Alefaso”
Aorian’io, ny filaharana miorim-paka amin’ny loko, ohatra, loko, loko hexadecimal, loko RGB ary anarana miloko dia feno sy feno ao anaty latabatra iray.
Ahoana?? Mora izany, sa tsy izany?
Manandrama mandefa sary betsaka araka izay anananao. Ary diniho ny valin’ny fitambaran’ny loko natokana amin’ny latabatra. Ny sary nalainareo dia hampiseho ireo loko ambony rehetra, ny loko hexadecimal, ny loko RGB ary koa ny anaran’ilay loko.
Esta "Ny fampidirana ny Palette loko" el gráfico tiene 20 colores dominados, que incluyen . Hace una combinación de colores tan hermosa inspirada en esta imagen.